युएईको रित्तो रंगशालामा चार दिनपछि सुरु हुँदै छ आइपिएल
२०७७ भदौ ३० मंगलबार १३:०२:००
विश्वकै चर्चित टी–२० फ्रेन्चाइज क्रिकेट लिग इन्डियन प्रिमियर (आइपिएल) १९ सेप्टेम्बरमा युएईमा सुरु हुँदै छ । १० नोभेम्बरसम्म चल्ने १३औँ संस्करणको आइपिएलमा सहभागी आठै टोलीका खेलाडी युएई पुगिसकेका छन् ।
इंग्ल्यान्ड र अस्ट्रेलियाबीच सिरिज चलिरहेका कारण यी दुवैै राष्ट्रका खेलाडी भने पछि मात्र युएई पुग्नेछन् । यसपटकको खेल–तालिकाअनुसार साबिक बिजेता मुम्बई इन्डियन्स र उपविजेता चेन्नई सुपर किंग्सबीच उद्घाटन खेल हुनेछ ।
इतिहासमा दोस्रोपटक दुबईमा आइपिएल लिग हुन लागेको हो । भारतबाहेक आइपिएल दक्षिण अफ्रिकामा पनि भइसकेको छ । भारतमा कोरोना भाइरस तीव्र रूपमा फैलिरहेकाले आयोजक भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बिसिसिआई)ले यसपटकको संस्करण दुबईमा गर्ने निर्णय गरेको हो । यद्यपि आइपिएल आयोजना गर्न श्रीलंकाले पनि इच्छा देखाएको थियो । तर, दुबईमा प्रतियोगिता गर्दा सुरक्षित हुने जनाउँदै बिसिसिआईले आइपिएल युएईमा गर्ने निर्णय गरेको हो । युएई, सारजहाँ र अबुधाबी सहरमा आइपिएल हुनेछन् ।
मुख्य आयोजकबाट भिभो आउट, ड्रिम ११ इन
यसपटक ड्रिम ११ कम्पनी आइपिएलको नयाँ मुख्य प्रायोजक हो । भिभो मुख्य आयोजकबाट हटेपछि बिसिसिआईले मुख्य स्पोन्सर्सका रूपमा ड्रिम ११ लाई छनोट गरेको हो । आइपिएलमा मुख्य प्रयोजक बन्न ड्रिम ११ र बिसिसिआईबीच दुई अर्ब २२ करोड भारुमा सम्झौता भएको छ । यसअघि भिभो पाँच वर्षसम्म मुख्य प्रायोजकको रूपमा रहेको थियो ।
आइपिएलको तयारी निमित्त सहभागी आठै टोलीका खेलाडीले अभ्यास थालनी गरेका छन् । खेलाडीलाई कोरोना भाइरसबाट सुरक्षित राख्न नियम तोकेको छ । दुबई पुगेका हरेक खेलाडी अनिवार्य आइसोलेसनमा बस्नुपर्नेछ । एक सातापछि उनीहरूको कोरोना परीक्षण हुनेछ । रिपोर्ट पोजेटिभ आए मात्रै प्रतिस्पर्धामा उत्रनेछन् । नगेटिभ आए पुनः आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने हुन्छ । कुनै खेलाडी संक्रमित भए, उनको स्थानमा जोकोही खेलाडी समावेश गर्न सकिन्छ । बिसिसिआईले अनलिमिटेड विस्थापन खेलाडीको प्रावधान निकालेको छ ।
दर्शकरहित हुने आइपिएलमा चियर्स गल्र्सको व्यवस्था स्क्रिनमा हुनेछ । उनीहरूले प्रत्येक चौका, छक्का प्रहार र ओभर समाप्तिपछि खेलाडीलाई मनोरञ्जन प्रदान गर्नेछन् । भिडियो स्क्रिनमा यस्तो मनोरञ्जन प्रदान गर्ने आयोजकले जनाएको छ । योपटक आइपिएलमा तीन सय ३२ खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । १३औँ आइपिएलकै महँगा खेलाडी अस्ट्रेलियाका प्याट क्युमिन्स हुन् । कोलकता नाइट राइडर्सले उनलाई १५ करोड ५० लाख भारुमा किनेको हो ।
विदेशी खेलाडी नै महँगा
यसपटक भारतीय खेलाडी अक्सनमा चुकेका छन् । अलराउन्डर युवराज सिंह कुनै समय आइपिएलकै सर्वाधिक महँगा खेलाडीमा गनिन्थे । पछिल्लो समय उनको ब्रान्ड भ्यालु घटेको देखिन्छ । बलिउड नायक शाहरुख खानको स्वामित्वमा रहेको कोलकाताले आइसिसी टेस्ट बलिङ वरीयताको शीर्ष स्थानमा रहेको क्युमिन्सलाई साढे १५ करोड बोली लगाउँदा अन्य कसैले पनि दाबी गर्न सकेनन् । कोलकाता अक्सनमा राम्रा खेलाडी भित्र्याउन कन्जुस्याइँ गर्दैन । सन् २०१७ को सिजनमा इंग्लिस अलराउन्ड वेन स्टोक्समाथि १४ करोड ५० लाख भारु खर्चेको थियो ।
अस्ट्रेलियाकै अर्का अलराउन्डर ग्लेन म्याक्सबेल किंग्स ११ पन्जाबमा १० करोड पाँच लाख भारुमा अनुबन्धित भए । यसपटक शीर्ष पाँच महँगा खेलाडीमा विदेशीकै राज छ । दक्षिण अफ्रिकाका क्रिस मोरिसलाई रोयल च्यालेन्जर्स बेंग्लोरले १० करोड भारुमा किन्न सफल भयो । किंग्स ११ पन्जाबले वेस्टइन्डिजका सेल्डोन काल्टरलाई आठ करोड ५० लाख भारुमा भित्र्याएको थियो ।
अक्सनमा को हाबी ?
गत १९ डिसेम्बरमा आइपिएलको अक्सन भएको थियो । जसमा तीन सय ३२ खेलाडी अक्सनमा थियो । सहभागी आठ फ्रेन्चाइज टोलीले खेलाडीसँग सम्झौता नवीकरण गर्दा ८५ करोड भारु खर्चिए । अक्सनमा एक खेलाडीको औसत मूल्य २० लाख भारुदेखि दुई करोड भारुसम्म राखिएको थियो । यसपटक रोयल च्यालेन्जर्स बेंग्लोरले केवल दुई विदेशी खेलाडीसँग मात्र सम्झौता नवीकरण गरेको छ । बेंग्लोरले दक्षिण अफ्रिकी खेलाडी एबी डी भिलियर्स तथा इंग्लिस खेलाडी मोइन अलीसँग मात्र नवीकरण गरेको हो । बेंग्लोरले ११ स्थानीय खेलाडीलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
यसैगरी किंग्स ११ पन्जाबले १६ खेलाडी रिटेन गरेको छ । यसक्रममा पन्जाबले ४२ करोड ७० लाख भारु खर्चियो । अनिल कुम्ब्लेको प्रशिक्षणमा रहेको पन्जाबले लोकेश राहुल तथा वेस्टइन्डिजका क्रिस गेललाई यथावत् राख्यो । चेन्नई सुपरकिंग्सले यसपटक अक्सनका लागि १४ करोड ६० लाख भारु बजेट राखेको थियो । यसैगरी दिल्ली क्यापिटल्सको २७ करोड ८५ लाख भारु बजेट देखिन्छ । दिल्लीले नेपालका लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेलाई रिटेन गरेको छ । सन्दीपको यो तेस्रो आइपिएल हुनेछ ।
स्टार खेलाडी भित्र्याउनका लागि किंग्स ११ पन्जाबले ४२ करोड ७० लाख भारु खर्चियो । खर्चिलो टोली मानिने कोलकाताले यसपटक अक्सनमा त्यति धेरै खर्च गरेन । यसपटक कोलकाता ३६ करोड ६५ लाख भारुका साथ अक्सनमा उपस्थित भयो । विश्वकै धनाढ्य अम्बानी परिवारको स्वामित्वमा रहेको मुम्बई इन्डियन्सको बजेट तुलनात्मक रूपमा थोरै रह्यो । मुम्बई अक्सनमा केवल १३ करोड भारु मात्र खर्चिएको थियो ।
पूर्वविजेता राजस्थान रोयल्सले ११ खेलाडी भित्र्याउन २८ करोड ९० लाख भारु खर्चिएको थियो । विराट कोहलीको कप्तानीमा रहेको रोयल च्यालेन्जर्स बेंग्लोरको बजेट २७ करोड ९० लाख भारु थियो । सनराइजर्स हैदरावादले सात खेलाडीका लागि १७ करोड भारु खर्च गरेको थियो । यसपटक ४५ चरणमा खेलाडी किनबेच भएको थियो । नौ सय ९७ खेलाडीले आफूलाई ड्राफ्टमा राखे ।
विजेता धनराशि घट्यो
विश्व नै कोरोना भाइरसबाट आक्रान्त बनेको समयमा आइपिएल हुँदै छ । यसकारण कोभिड–१९ ले यसलाई आइपिएल प्रभावित नहुने कुरै भएन ।
कोरोना महामारीअघि अक्सनमा खेलाडीहरूमाथि करोडौँ खर्च भएको थियो । त्यही अनुपातमा विजेता धनराशि पनि राखिएको थियो । अहिले मुख्य आयोजक बिसिसिआईले विजेता धनराशिमा कटौती गरेको छ । यसपटकको विजेताले १० करोड र उपविजेताले ६ करोड २० लाख भारु पाउनेछन् । यसैगरी तेस्रो र चौथो स्थानमा रहने टोलीले समान चार करोड ३७ लाख भारु पाउने उल्लेख छ । गत वर्षको तुलनामा यसपटक ५० प्रतिशत विजेता धनराशि घटेको छ । सन् २०१८ र २०१९ को विजेताले २० करोड भारु र उपविजेताले १२.५ भारु पाएका थिए । यसैगरी सन् २०१९ मा तेस्रो र चौथो हुने टोलीले आठ करोड ७५ लाख भारु पाएका थिए ।
कस्ता छन् कप्तान ?
साविक विजेता मुम्बई इन्डियन्सका कप्तान रोहित शर्मा लक्की नै छन् । आइपिएलको इतिहासमा उनी सर्वाधिक सफल कप्तान हुन् । रोहितको कप्तानीमा मुम्बईले चारपटक उपाधि जित्यो । सन् २०२० को सिजनमा पनि मुम्बईका समर्थकले लक्की कप्तानीले उपाधि दिलाउने अपेक्षा राखेका छन् ।
रोहितपछि महेन्द्रसिंह धोनी सफल कप्तानमा पर्छन् । भारतीय क्रिकेट इतिहासकै सबैभन्दा सफल कप्तानी ठहरिएका धोनीले चेन्नई सुपरकिंग्सको कप्तानी गर्छन् । आइपिएलको तथ्यांकअनुसार धोनीलाई सर्वाधिक सफल कप्तानभन्दा फरक नपर्ला । उनको कप्तानीमा चेन्नईले तीनपटक उपाधि जितेको थियो । यसैगरी धोनीले चेन्नईलाई पाँचपटक उपविजेता बनाए । यस अर्थमा चेन्नईले धोनीको नेतृत्वमा आठपटक फाइनल खेल्यो ।
भारतका अनुभवी विकेटकिपर ब्याट्सम्यान दिनेश कार्तिकले कोलकाता नाइट राइडर्स हाँकेका छन् । कोलकाताले आइपिएल उपाधि उचाल्दा उनी नै कप्तान थिए । सन् २०१८ मा कोलकाता प्लेअफमा पुगेको थियो । सन् २०१९ को संस्करणमा झिनो अन्तरले कोलकाता प्लेअफमा पुग्न सकेन । यसपटक कोलकाताका प्रशिक्षक ब्रेन्डोन म्याककुलम छन् ।
अस्ट्रेलियाका विस्फोटक ओपनर डेभिड वार्नरले सनराइजर्स हैदरावादको कप्तानीको जिम्मेवारी लिएका छन् । सन् २०१८ मा वार्नरले न्युजिल्यान्डका कप्तान केन विलियम्सनलाई विस्थापित गर्दै कप्तानी जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । वार्नरकै कप्तानीमा सन् २०१६ मा हैदरावादले पहिलोपटक उपाधि जितेको थियो । सन् २०१९ को सत्रमा वार्नर सर्वाधिक रनकर्ता बनेका थिए ।
अस्ट्रेलियाका पूर्वकप्तान स्टिभ स्मिथ प्रतिबन्ध सकाएर अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा फर्किएपछि राजस्थानबाट आइपिएल खेले । यसअघि राजस्थानको कप्तानी अजिन्का राहनले गरेका थिए । आइपिएलको पहिलो सिजनको उपाधि राजस्थानले जितेको थियो । त्यसपछि राजस्थान उपाधिविहीन छ । भारतीय टोलीका कप्तान विराट कोहलीले नेतृत्व गरेको रोयल च्यालेन्जर्स बेंग्लोरमा एक से एक खेलाडी भए पनि उपाधि जित्न सकेको छैन । सन् २०१६ पछि बेंग्लोर प्लेअफमै पुग्न सकेको छैन । पछिल्लो तीन सिजनमा बेंग्लोर छैटौं भएको थियो । यसपटक बेंग्लोरले राम्रा खेलाडी भित्र्याएको छ ।
दिल्ली क्यापिटल्सको भरोसा श्रेयास इयर हुन् । २५ वर्षीय श्रयर सन् २०२० को आइपिएल सिजनका सबैभन्दा युवा खेलाडीमा पर्छन् । सन् २०१८ मा उनले गौतम गम्भीरलाई कप्तानीमा विस्थापित गरेका थिए । किंग्स ११ पन्जाबका कप्तानी लोकेश राहुलले गरेका छन् । सन् २०१९ देखि नै उनले कप्तानीको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । सन् २०१९ को अक्सनमै पन्जाबले राहुल कप्तान भएको घोषणा गरेको थियो । लोकेशले सन् २०१८ मा पाँच सय ९३ रन र सन् २०१९ मा ६ सय ८४ रन जोडेका थिए । यसपटक पनि उनको ब्याटिङ चल्ने विश्वास छ ।
१३औँ आइपिएलका पाका खेलाडी
आइपिएल सुरु हुँदा एउटा पक्ष सधैँ चर्चा हुने गर्छ । यस सिजनमा को खेलाडी पाका छन् । १३औँ सिजनमा धेरै पाका खेलाडी रहने पक्का छन् । चेन्नईका कप्तान महेन्द्रसिंह धोनी ३९ वर्षका भएका छन् । उनका सहयोगी सेन वाट्सन पनि पाका खेलाडीमै पर्छन् । भारतीय खेलाडी प्रवीण ताम्बे सबैभन्दा पाका खेलाडी हुन् । उनी ४८ वर्षका छन् । प्रवीणको फिटनेसमा कमी आएको छैन । दक्षिण अफ्रिकाका स्पिनर इमरान ताहिर चेन्नईबाट खेल्छन् । उनी ४१ वर्षका हुन् । यसैगरी पन्जाबका क्रिस गेल (४०), दिल्लीका अमित मिश्रा (३७) र बेंग्लोरका डेल स्टेन (४०) वर्षका छन् ।
यसअघिका विजेता टिम
सन् विजेता उपविजेता उत्कृष्ट खेलाडी
२०१९ मुम्बई चेन्नई एन्ड्रे रसेल
२०१८ चेन्नई हैदराबाद सुनिल नारिन
२०१७ मुम्बई पुने वेन स्टोक्स
२०१६ हैदराबाद बेंग्लोर विराट कोहली
२०१५ मुम्बई चेन्नई एन्ड्रे रसेल
२०१४ कोलकाता किंग्स ११ ग्लेन म्याक्सबेल
२०१३ मुम्बई चेन्नई सेन वाट्सन
२०१२ कोलकाता चेन्नई सुनिल नारिन
२०११ चेन्नई बेंग्लोर क्रिस गेल
२०१० चेन्नई मुम्बई सचिन तेन्दुलकर
२००९ डेकन बेंग्लोर एडम गिलक्रिस्ट
२००८ राजस्थान चेन्नई सेन वाट्सन
#इन्डियन प्रिमियर # युएई
कोरोना संक्रमणबाट युएईमा पाँच नेपालीको निधन
सरकारले उद्धारको नाममा व्यापार गर्न थालेपछि श्रमिक आक्रोशित, नि:शुल्क उद्धार गर्न माग
राष्ट्रिय प्राथमिकता हेरेर परियोजना स्वीकृत गर्न परिषद्लाई समितिको निर्देशन